ITS Tech School Training & Certification Ọzụzụ & Akwụkwọ
Ọzụzụ & Akwụkwọ
Usoro akwukwo na ihe omuma nile
Open Source Technology bụ otu n'ime nkà na ụzụ kachasị eji eme ihe n'ụwa taa na Redhat na-achịkwa na ihe nkesa doro anya nke dabeere na gburugburu. Redhat Na-enye ọtụtụ dị iche iche, ọzụzụ na asambodo maka mmụba ọ bụla. Ihe aga-eme na Uhie okpu.
Na-arụ ọrụ na ngwaahịa Microsoft dị mkpa ma ọ bụ maka nnyefe ma ọ bụ mmekọrịta ọrụ, ya mere, anyị na IT site na enyemaka nke ọzụzụ anyị na-eme ka ị rụọ ọrụ nke ọma iji teknụzụ Microsoft & ghọọ ọkachamara a kwadoro Microsoft.Dị ghọta ọrụ AD RMS na-arụ.
The ITIL (Teknụzụ Akụrụngwa Ịzụ Ihe ọmụma) kpuchiere iji dokwuo nhọrọ, atụmatụ, nnyefe na nkwado nke ọrụ IT na azụmahịa. Ihe mgbaru ọsọ bụ iji melite arụmọrụ na imezu ọkwa ọrụ.
Onye ndu na agụmakwụkwọ cyber nche Ọ BỤ offers accredited online cyber security degrees for advancing IT security careers.EC-Council is a global leader in InfoSec Cyber Security certification programs like CEH. India’s Leading Professional EC-Council.
Ndị ọrụ nchịkwa mmadụ is used to describe both the people who work for a company or organization & the department responsible for managing related to employees.It is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives.
Devops pụtara, onye ghọtara arụmọrụ & arụ ọrụ na mmepe ma na ihe gbasara ọganihu ọrụ, ọ na-ebute njikọ nke usoro ihe omume nke "oge a". Ogologo ohere ọrụ na-arịwanye elu.
Mụta usoro omume kachasị mma, kwadoro usoro nchedo IT yana iwu na ụkpụrụ NIST, ma ọ bụ nweta Pnetwọk rotect, Kọmputa, Mmemme, CISSP, CompTIA Nche +, CASP, CEH certifications na ndị ọzọ!
CISCO bụ onye ndú ụwa na Network & routers ngwa. CISCO na - enye ọrụ zuru ezu na ọrụ ya dị ka CCNA, CCNP & CCIE .Ọ na - enye ngwakọta nke nkà na ụzụ.
Digital ahịa bụ otu n'ime ụlọ ahịa nke ahịa nke na-eji teknụzụ dijitalụ ịme ma na-ere ngwaahịa. It gbasapụ na ịntanetị marketing na-agụnye ọwa ndị na-anaghị achọ ịntanetị.
Njikwa ọrụ bụ ịdọ aka ná ntị nke ịmalite, ime atụmatụ, ime, ịchịkwa, na imechi ọrụ otu otu iji nweta ihe mgbaru ọsọ a kapịrị ọnụ na izute nhazi ihe ịga nke ọma n'oge a kara aka.
ule usoro gụnyere usoro nke ime ihe omume ma ọ bụ ngwa na nzube nke ịchọta software bugs (njehie ma ọ bụ ntụpọ ndị ọzọ), na ikwenye na software Ngwaahịa kwesiri iji.
Nhazi usoro bụ akụkụ dị mkpa nke usoro sistemụ ọgbara ọhụrụ (OS). Os ga etinye ala ya Filiks, nye Filiks ịkekọrịta ma gbanwee ozi, chebe ego nke ọ bụla usoro site na ndị ọzọ Filiks.
Chọta ihe omume IT dị gị mkpa: F5 GTM, Primavera P6, Data Integration. Mụta nkà ọhụrụ, dozie maka akwụkwọ ntinye aka na ntanetị ma nyekwa ọzụzụ dị ọcha iji nyere ndị mmepe, ọkachamara IT.